Idatha namafayela we-Huawei Ucingo Clone Transfer ku-Smartphone entsha 🥇 Emulator.online ▷ 🥇
Idatha namafayela we-Huawei Phone Clone Transfer ku-Smartphone Entsha
Ingabe uthenge i-smartphone entsha sha futhi manje ungathanda ukudlulisa yonke idatha yakho isuka kuselula yakho endala iye kweyakho entsha? Isixazululo sithi Ifoni ye-Huawei, isicelo esakhiwe inkampani edumile yaseChina, ephelele, multiplatform ngakho-ke iyahambisana ne-Android ne-iPhone.
Lolu hlelo lokusebenza luhle kakhulu kulabo abasuka ku-iPhone baye kwi-smartphone entsha ye-Android futhi, ngaphezu kwakho konke, kulabo abashintsha ifoni yabo yeHuawei bayinikeze olunye uhlobo (ngoba namuhla amafoni akwaHuawei ngokuqinisekile athengisa ngaphansi kwesikhashana esedlule).
FUNDA NONKE:Dlulisa idatha kusuka kuselula eyodwa ye-Android iye kwenye ngokuzenzakalela
cunt Ifoni ye-Huawei Kungenzeka:
dlulisa idatha kusuka ku- iPhone/iPad i-smartphone Huawei futhi okuphambene nalokho;
dlulisa idatha kusuka ku- iPhone/iPad i-smartphone Android futhi okuphambene nalokho;
dlulisa idatha kusuka ku-smartphone Android i-smartphone Huawei futhi okuphambene nalokho;
dlulisa idatha phakathi kwama-Smartphones Huawei.
Amafayela adluliswayo nedatha
yo idatha engadluliselwa nge- Ukukhala kwefoni Yilezi ezilandelayo:
oxhumana nabo ocingweni;
Ngezizathu zokuphepha ezibekwe ngu Android kukhona imininingwane ukuthi cha ingadluliselwa:
idatha evela kuzinhlelo zokusebenza ezifana ne-WhatsApp;
idatha efwini: isibonelo, izithombe ezilondolozwe ku-Izithombe ze-Google;
Ungayidlulisa kanjani idatha nge-Clone yefoni
1) Okokuqala udinga ukufaka uhlelo lokusebenza lwamahhala Ukukhala kwefoni kuwo womabili amadivayisi. Uma ama-smartphone womabili Huawei uzothola uhlelo lokusebenza seluvele lufakiwe.
2) Uma uhlelo lokusebenza selulandiwe, kufanele luvulwe kuwo womabili amadivayisi bese luchofoza "Ukwamukela" Ngezansi kwesokudla;
3) Kuwo womabili amadivayisi, isiqinisekiso ukwazi ukufinyelela kwimininingwane yakho;
4) Uma usunike imvume ku-smartphone yakho yakudala, ikhamera izovula ikucele ukuthi uhlele i-a Ikhodi ye-QRngenkathi ku-smartphone entsha kuzodingeka ukhethe uhlobo oludala lwefoni phakathi "Huawei", "Enye i-Android", "iPhome / iPad". Khetha okulungile bese Ikhodi ye-QR.
5) Nge-smartphone yakudala, biyela ifreyimu ye- Ikhodi ye-QR: kusuka lapha umzamo wokuxhuma phakathi kwamadivayisi womabili uzoqala, lapho isiqinisekiso ukuxhumana ngumsebenzisi ngewindi le-pop-up.
6) Manje ungacacisa ukuthi yimaphi amafayela ozowadlulisa kusuka ku-smartphone yakudala "Iyavela"lezo ozithandayo.
7) Cindezela "Isiqinisekiso" futhi inqubo yokufuduka kwedatha izoqala ngokuzenzakalela.
Ukudluliswa kwedatha kwenziwa ngesixhumanisi sohlobo I-Wifi kudaliwe kulokhu phakathi kwamadivayisi womabili: ngale ndlela inqubo izoba ukuphepha mi rápido.
Uma unedatha eningi, ukufuduka kungathatha imizuzu eminingana, kepha inkomba esele yesikhathi isazovela esikrinini. Uma ukuxhumana phakathi kwama-smartphones kuphazamisekile, inqubo izophindwa futhi ukudluliswa kuzoqala kabusha lapho kumiswe khona.
FUNDA NONKE: Shintsha kusuka ku-Android uye ku-iPhone bese udlulisa yonke idatha
Ungaqonda kanjani uma othile asihlola kusuka kumakrofoni (i-PC ne-smartphone)
Ungayithumela kanjani i-imeyili njengokunamathiselwe kwi-imeyili
Yenza kusebenze imilayezo yesikhashana ku-WhatsApp, enyamalala ngemuva kwezinsuku ezingu-7
Ungayishintsha kanjani ifonti ku-Huawei smartphone
Ungakhiya kanjani i-iPhone, zonke izindlela
Ungashintsha kanjani kusuka ku-iPhone endala uye entsha
Ungasakha kanjani isiteshi sangasese se-YouTube somndeni, abangane kanye nozakwethu
Ungawakha Kanjani Amavidiyo Amafushane Ahlekisayo ngama-Reels we-Instagram
Izimpawu nezinhlamvu ezikhethekile ezinekhibhodi
Isicelo sokuqapha izingane ezingaphandle kwekhaya
Ucingo olusha lwe-Android? Ungayidlulisa kanjani yonke idatha kusuka kufoni yakudala
Ungayinquma kanjani ividiyo ku-WhatsApp